« Jesoa mpiandry ondry tsara » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady Paka 04 B
Asa 4, 8-12; 1 Jn. 3, 1-2 ; Jn. 10, 11-1
"Jesoa mpiandry ondry tsara"
Miditra amin’ny herinandro fahefatra ny fibanjinana an’i Jesoa Kristy nitsangan-ko velona ny litorijia amin’ny alahady anio. Antsoina hoe fetin’ny mpiandry ondry tsara izao alahady fahefatra izao noho ny evanjely mitantara an’i Jesoa mpiandry ondry tsara. Andro natokana hivavahana ho an’ny Fiantsoan’Andriamanitra ihany koa amin’ny maha alahady fahefatra amin’ny Paka azy : Alahadin’ny mpiandry ondry tsara : « Ary i Jesoa niteny tamin’ny Jody nanao hoe : ‘Izaho no mpiandry ondry tsara. Ny Mpiandry ondry tsara dia mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny» (Jn. 10, 11). Endrika telo indrindra àry no entin’i Jesoa maneho ny maha mpiandry ondry tsara Azy.
« Izaho no mpiandry ondry tsara : Ny mpiandry ondry tsara mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny ». Izany no toetra voalohany anehoan’i Jesoa ny maha mpiandry ondry tsara Azy. Tsy mba toy ny mpikarama, hoy Izy, izay mandositra sy tsy miraharaha akory ny ondry raha tonga ny amboadia fa tena tompon’ny ondry ka tsy hamela azy ho viravirain’ny amboadia. Hita tokoa izany tamin’ny fijalian’i Kristy. Niaro ireo mpianany izy fony tonga ireo mpisambotra azy. Navelany handeha ireo fa izy kosa nitolo-batana tamin’ny mpisambotra. Miantso olona maro ho mpiandry tsara sy mahatoky ny Tompo.
« Izaho no mpiandry ondry tsara, sady mahalala ny Ahy aho no fantatry ny ahy, tahaka ny ahalalan’ Ray Ahy sy ahalalako ny Ray koa, … ». Toetra faharoa anehoan’i Jesoa ny maha mpiandry ondry tsara Azy ny fahalalàny ny ondriny. Ny mpiandry ondry tsara mahalala ny ondriny ary ny ondriny mahafantatra Azy. Fifankalalana, fifankazahoana, izany tokoa no endriky ny fifandraisan’i Jesoa tamin’ireo mpianany. Mbola irîna ho toy izany koa no ifandraisany amin’ny kristianina. Izy moa efa mahalala rahateo ny tsirairay. Ny kristianina kosa mihezaka isan’andro ahafantatra Azy bebe kokoa. Izany fifankalalana izany dia mifototra indrindra amin’ny fifankalalan’i Jesoa amin’ny Ray. Fifandraisan’ny ray aman-dreny sy zanaka. Fifankalalan’ny mpiray tampò ihany koa. Fifandraisan’ny mpitondra vahoaka amin’ny olona entiny.
« Mbola manana ondry hafa koa Aho izay tsy amin’ity vala ity, ka tsy maintsy hoentiko izy sy hihaino ny feoko dia ho tonga valan’ondry tokana sy mpiandry tokana ». Toetra faha telo maha mpiandry ondry tsara an’i Jesoa ny famoriany ny andian’ondriny ho ao amin’ny vala tokona. Ny mpiandry ondry tsara dia mamory ny ondry rehetra ao amin’ny valan’ondry tokana mba ho mpiandry tokana no hiandry azy rehetra. Tonga i Jesoa hamondrona fa tsy hanasaraka. Hampiray fa tsy hanaparitaka. Nambarany ombieny ombieny izany tamin’ny nilazàny fa rehefa tafasandratra hiala amin’ny tany Izy dia hitarika ny olona rehetra hanatona azy. Nambarany ihany koa izany tamin’ny vavaka nataony manao hoe : « Ray ô ! Aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy ».
Enga anie ka ny tenin’i Jesoa Kristy manambara ireo toetra telon’ny mpiandry ondry tsara no iezahan’ireo izay voaantso hohenoina sy hodinihina ary hivelomana: tsy mpikarama fa tompony ka manaja sy mikolo ary mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny. Tsy olona mikombona amin’ny tenany fa olon’ny fifandraisana aman’olona. Tsy olon’ny fampisaraham-bazana fa olon’ny fampihavanana sy fampiraisana ary manohy ny asan’i Kristy mba ho iray tokoa ireo mpianany rehetra.
Andro natokana hivavahana ho an’ny Fiantsoan’Andriamanitra, izany hoe ho an’ireo misafidy ny fiainana Pretra sy Relijiozy, ihany koa ny andro alahady fahefatra amin’ny Paka. “Md Josefa sy ny nofy fiantsoan’Andriamanitra”. Izany no lohahevitra ho enti-mivavaka hoan’ny Fiantsoan’Andriamanitra amin’ity alahady fahefatra ity. Asongadina amin’io lohahevitra io ny toetra telo nianan’i Md Josefa nentiny namaliana ny fiantsoan’Andriamanitra azy: ny nofy sy ny asa fanompona ary ny fahatokisana. Enga anie ireo Olomboatoka sy ireo maniry hiaina ny fiainana maha Pretra sy Relijiozy mba hanovo ainga vao amin’ny fandinihana ny nofin’i Md Josefa sy ny asa fanompoana nataony ary ny toetra mahatoky nananany.
« Sahy manolotra ny ainy ho an’ny ondriny rehetra ny mpiandry ondry tsara. Ka ny ràny sy ny tenany dia afoiny manontolo ho sakafon’izy ireny » (VIA, Vavaka hatory – Alakamisy 4).